Man United oo ay dhaawacyo kasoo gaareen Anders Lindegaard iyo Shinji Kagawa. - Caasimada Online
Home Warar Man United oo ay dhaawacyo kasoo gaareen Anders Lindegaard iyo Shinji Kagawa.
Man United oo ay dhaawacyo kasoo gaareen Anders Lindegaard iyo Shinji Kagawa.
Tababaraha Manchester United Sir Alex Ferguson ayaa daaha ka qaaday in Anders Lindegaard uu dhaawac u seegi doono kulanka ay wajahayaan Chelsea, halka uu sidoo kale xaqiijiyey in dhaawaca Shinji Kagawa laga warbixin doono Arbacada [Maanta].
Goolhayaha dalka Denmark ayaan ka mid aheyn kooxdii Red Devils ee Champions League la ciyaartay Braga Ferguson ayaana ciyaarta ka dib xaqiijiyey inuu dhaawac qabo, uuna sidoo kale seegi doono kulanka ay axada wajahayaan kooxda ugu sareysa Horyaalka ee Chelsea.
“Anders wuxuu seegi doonaa kulanka axada,” ayuu SAF u sheegay saxaafada.
“Wuu soo hagaagi doonaa ilaa isbuuc laakiin diyaar uma noqon doono kulanka Axada.”
Tababaraha Old Trafford ayaa sidoo kale sheegay inuu shaki ku jiro Shinji Kagawa safarka ay ku tegayaan Stamford Bridge. Ciyaaryahanka reer Japan ayaana qeybtii labaad lagu bedelay Nani ka dib markii uu soo gaaray dhaawac jilibka ah.
“Shinji laba mar ayaa jilibka jug ka gaartay,” ayuu yiri mar kale Ferguson
“Waxay aheyd inaan bedelnay. Wuxuu ku dhibaatoonaayey dhaawacaan ilaa 20 daqiiqo. Waxaan sheegi doonaa subaxdii sida ay xaaladiisu tahay.”